Otu esi enweta Boracay? Zọ ụgbọ elu, oke osimiri ma ọ bụ ala | Akụkọ Njem
Maria José Roldan | | Philippines, Nduzi, Asia njem
Mgbe ịchọrọ ịla ebe ha bụ naanị nsogbu, ị nwere ike ọ gaghị enwe mmasị ịme ya, mana mgbe akara aka kwesịrị mgbalị, Yabụ na ọ dị mma ịchọọ ihe niile ga-eme ka ị nwee ike ibata ma ị gaa nleta.
Nke a bụ ọnọdụ Boracay, bụ ebe ndị njem nleta na-eleta mana ha na-ahụ ha ma chọọ ka ha nwee ike iru ebe ha na-aga. Mana ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịga Boracay na ezumike ma ọ bụ mata ya ma ị maghị etu ị ga-esi mee ya, taa achọrọ m inye gị obere ntụzi aka ka i wee buru ya n’obi mgbe ịchọrọ ịhazi njem gị.
1 Boracay, ebe dị n'eluigwe
2 Otu esi aga Boracay
3 Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe iji gaa ụgbọ elu
4 Usoro iji ruo Boracay
5 Iji ụgbọ mmiri na-eme njem nwere ike ịbụ nhọrọ ọzọ dị irè
6 I nwekwara ike iji bọs
Boracay, ebe dị n'eluigwe
Nke mbu achoro m igwa gi obere ihe banyere Boracay ma o buru na imaghi ebe o di ma obu udi ebe o di. Boracay bu nke Philippines dika Ibiza diri Spain. Ọ bụ obere agwaetiti dị na ndịda Manila, ihe dị ka kilomita 300 ma ndị njem nleta na-eleta ya kwa afọ n'ihi oke osimiri ya dịka Playa Blanca a ma ama.
A na-akpọ osimiri a ekele ya maka ájá ọcha ya dị egwu na mmiri ya dị egwu nke na-eme ka ọ bụrụ ihe kachasị mma maka ndị hụrụ ọdịdị ala paradaịs. N'ezie, ọ bụ ebe a na-arọ nrọ, mana ọ bụrụ naanị na ị na-achọ ka ụlọ ebe ịhịa aka n'ahụ, ụlọ nri, ụlọ oriri na ọ ,ụ hotelsụ nke ọtụtụ ụdị na oge niile. Enwekwara ihe omume mmiri nke na-abụkwa ezigbo nkwupụta, ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ na-enye ndị njem nleta ezinụlọ na enwere ụlọ nkwari akụ dị elu maka kachasị iche.
N'ime iri afọ atọ gara aga, agwaetiti ahụ agbanweela na ọ esiwo na-abụ a kpam kpam nrọ agwaetiti na-erigbu maka njem, ihe na mwute ikwu na ike ohi ya amara na-ebibi na-amaghị nwoke ọdịdị nke ji ya mgbe ọ bụ a jụụ agwa jupụtara anwansi. Ọtụtụ ndị njem nleta hụrụ ya n'anya n'ihi na ọ bụ ezie na a na-erigbu ha nke ukwuu, a ka nwere ebe dị jụụ a na-akọwaghị n'ụdị coves. Mana iji nwee ike ịnweta ebe ndị a, ọ ga-aka mma ka ị mara ebe ị na-aga ma ọ bụ nwee ezigbo ntụzi aka iji soro gị yana ị gaghị enwe nsogbu nke ị furu efu na mpaghara ndị amaghi.
Na mgbakwunye agwaetiti a nwere ndụ abalị dị egwu, nkwupụta siri ike karị maka ọtụtụ ndị njem nleta na-achọ nnọkọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, egwu ma nwee ọmarịcha ebe dị mma.
Otu esi aga Boracay
Thezọ mbata nke agwaetiti Borocay bụ obere obodo Caticlan, na agwaetiti bụ isi, ebe ụgbọ mmiri na-ahapụkarị. Otu n’ime ụzọ iji ruo Borocay bụ ikuku. Mpaghara ọdụ ụgbọ elu mpaghara, obere ụgbọ mmiri si Boracay, dị na Caticlan. Airgbọ elu ị nwere ike ịga bụ: Ndịda ụgbọ elu ndịda ọwụwa anyanwụ Asia, Mmụọ Asia, Philippine na Cebu Pacific.
Na nkenke, ị nwere ike ibata na-echebara nhọrọ dị iche iche echiche:
Site na Manila. Ọtụtụ ụgbọ elu kwa ụbọchị si na Manila Airport gaa Caticlan Airport ma ọ bụ ọdụ ụgbọ elu Kalibo. Site na ọdụ ụgbọ elu Caticlan ọ na-ewe ihe dị ka nkeji iri na ise iji rute ụgbọ elu ahụ wee jiri nkeji iri na ise jiri ụgbọ mmiri rute n'àgwàetiti Boracay. Ma mgbe ị bịarutere, ị ga-enwe njem ọzọ nke ihe dị ka nkeji 15 ruo mgbe ị ruru ebe ndị njem nleta na Playa Blanca.
Site na obodo Cebu. Enwere ụgbọ elu kwa ụbọchị site na ọdụ ụgbọ elu Cebu ruo Caticlan ma ọ bụ ọdụ ụgbọ elu Kalibo.
Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe iji gaa ụgbọ elu
Gbọ elu dị n'etiti 35 na 45 nkeji I kwesịrị ịma na ụgbọ elu si Manila na-ahapụkarị ọdụ ụgbọ elu ụlọ ma ọ bụghị site na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa. N'ebe ahụ, ị ​​ga-anakọta ma lelee akpa gị n'onwe gị, yabụ na ị ga-akpachara anya ka ihe onwunwe gị ghara ịdị mma.
Usoro iji ruo Boracay
Asia Mmụọ na South East Asia ụgbọ elu nwekwara ụgbọ elu dị n'etiti Caticlan na Cebu, yana n'etiti Caticlan na Los Angeles. Air Philippines malitere site na ụgbọ elu kwa ụbọchị n'etiti Manila na Caticlan ruo na Disemba 15, 2007.
Ọtụtụ ụgbọ elu na-akwalite ụgbọ elu n'etiti Boracay na-efega Kalibo, nke bụ nke kacha nta 90 nkeji ụgbọ ala na-agba ịnyịnya, dabere na okporo ụzọ. A na-atụkarị aro ka ndị njem nwere ahụmahụ gaa Caticlan iji zere njem a site na bọs, ma n'èzí ma laghachi.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ njem agaghị agwa gị nhọrọ aAgbanyeghị, ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na i chebara ya echiche iji zere inwe mmetụta furu efu n'etiti enweghị ebe, ihe nwere ike iwepụta echiche na-adịghị mma n'etiti mba ị na-amaghị. Thegbọ elu ndị gbaga Kalibo bụ Philippine Airlines na Cebu Pacific. Gbọ elu si Manila na Kalibo na-eme ụgbọ elu. Oge Flight bụ naanị nkeji 35.
Iji ụgbọ mmiri na-eme njem nwere ike ịbụ nhọrọ ọzọ dị irè
Nhọrọ ọzọ bụ iji ụgbọ mmiri mee njem, nke MBRS na akụkụ nke ọdụ ụgbọ mmiri Manila gaa Caticlan, mana ihu ala bụ na ha na-eme otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n'izu, dabere na oge. N'otu aka ahụ, Ntugharị Negros na-eme njem nwa oge dị kilomita ole na ole site na Boracay's Playa Blanca. E nwere ụgbọ mmiri dị iche iche kwa ụbọchị nke na-arụ ọrụ n'etiti Roxas (Mindoro) na Caticlan. Bogbọ mmiri ndị mbụ na-ahapụ ihe dịka 6 nke ụtụtụ na ndị ikpeazụ na 4 n'ehihie. Ọ dị mkpa iji oge na-abịa n'oge ka ọ ghara ịnọ n'ala.
I nwekwara ike iji bọs
N'ikpeazụ, ị nwere ike ịhọrọ njem ụgbọ ala. Philtranco nwere bọs na-esite na Cubao, Manila na-aga mgbe niile, na-agafe Caticlan. Njem a were awa iri na abụọ yabụ ị ga-enwerịrị nnukwu ndidi ma mara na inwere oge ahụ niile.
Ugbu a ị matara nke ọma gbasara agwaetiti a ma nwee ike ịduzi gị ụzọ ị ga-esi ebe ahụ, ikekwe site ugbu a gaa n'ihu, ị ga-anwa ịhazi nleta na ebe a iji kporie ala ya niile na ihe ọ bụla ọ ga-enye.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » Philippines » Otu esi aga Boracay? Airway, seaway & landway
Uwe nke charros ma ọ bụ mariachis: omenala ndị Mexico